Jiangsu KingRay Composite Material Co., Ltd. kuyinto nomkhiqizi professional PTFE / Teflon Seamless fusing amabhande, Teflon Laminator Khipha Indwangu / Teflon-fiberglass Indwangu, Teflon-fiberglass Indwangu ingcina, Teflon-fiberglass Mesh ibhande, Teflon kuhhavini linner, Teflon microwave dryer ibhande, Teflon ukushisa ukubekwa uphawu ibhande, Teflon Separater Khipha Belt, abicah iraba Indwangu. Nge imishini eziphambili kanye nobuchwepheshe.
Sesidlule ISO9001 naseJalimane DQS ukuqinisekiswa kule lwasekhaya babenza umsebenzi ofanayo. Kusukela kusungulwe, siye ukunamathela imimoya ibhizinisi "lunye, Technicalization, Scale, Abantu Okokuqala, Nokusungula."
Sesisungule sekukudala nge abanye abakhiqizi adumile mechanical kokubili ekhaya aphesheya, efana Veit GmbH, Hashima, Oshima, Summit, kanye nezinkampani KDK. Imikhiqizo yethu kabanzi zithunyelwe emazweni angaphezu kuka-20 kanye nezifunda, futhi baye bayinqoba amakhasimende bakwethembe futhi simdumise.
Siyaqiniseka ukuthi imikhiqizo yethu izinga okusezingeni namasevisi kakhulu uyokhanga ukwazisa amakhasimende bayanda '. Ixhumana kithi kuyisinyathelo sokuqala ukwakha ubuhlobo elichumayo nathi. Uma unesithakazelo kunoma yimiphi imikhiqizo yethu, sicela ukhululeke uvakashele iwebhusayithi yethu noma uxhumane nathi ngqo ukuze uthole olunye ulwazi. Sibheke phambili ubambisana nawe esikhathini esizayo esiseduze.